Abantu abaninzi kuluntu lwethu banokuqiniseka ukuba amadoda kuphela angaba isithembu kwaye abafazi abanandaba. Gcwalisa i ntsilelo! Umgangatho omhle unokuba isithembu.
Kungenzeka ukuba udibene okanye wazi nokuba intombi, intombazana intombazana-enokuhlangana okanye ukudibana ixesha elide kunye nabalingani ababini okanye ngaphezulu. "Inkcazo ye-Snow White" ukuya kutsho-into efanayo.
Isithembu seTyhini, kuxhomekeke kumfazi ngamnye, sinokuhlulwa kwiintlobo ezi-3.
Uhlobo lo kuqala " ngumthandi womqokeleli. " Olu hlobo luthandwa nje kukuba akanalo, kodwa amaqabane adibeneyo, ukuba intombi zakhe eziqhelekileyo ziqhamuka ngomona kwaye ngenxa yokuba ungumqambi onobuqili neqhinga.
Uhlobo lwesibini " luthandabuzo ". Olu hlobo lwabasetyhini lubonakala luthanda bobabini, kodwa, ngelanga, alukwazi ukwenza ukhetho kwicandelo elinye. Kule meko, amanani abonisa ukuba ubudlelwane obunjalo buphela kumgaqo - "Iimbumba ezimbini" ...
Ewe, uhlobo lwesithathu lwe-" Consumer's predator ". Uhlobo lokugcina lwesithembu abafazi abanobuhlobo obunjalo bubala. La mabhinqa akholelwa ukuba indoda ayikho enye i-homie ezisa ubucwebe obuxabisekileyo, ubulili obusemgangathweni, iholele umfazi kwiindawo zokudlela kwaye imlethe kwindawo ethile yentlalo kuluntu ... Eyona nto inokwenzeka ukuba umyeni ungumthombo wokunyamekela, ukukhathalela kunye nomdla . Ngelishwa, kwihlabathi lethu, ngexesha lethu, indoda enye ayikwazi ukunika intombazana into ayifunayo. Kule nkalo, abaxhamli bathi baninzi amadoda ebomini babo, ngakumbi kule nzuzo. Ngamnye wabo uletha inzuzo yakhe-umntu uthatha ikhefu, umntu uthatha kwindawo yokutyela, kwaye umntu uyayithanda. Kwaye emva koko, akukho nto ayifanelekanga kumqokeleli oqhelekileyo.
Kodwa ngamanye amaxesha kukho olunye uhlobo lwesithembu sabasetyhini. Ngokomzekelo, ukungazenzisi - ukuphindisela kwi-zapolamnost yonke yowesilisa ... Kubonakala ngathi, yintoni eyona nto ibalulekileyo? Yiyiphi inkohliso? Kodwa ngenxa yowesifazane, oku kuchazwa lula kakhulu - emva kokuba efumene ukuba indoda yakhe ethandekayo inomnye umthandana naye adibana naye. Emva koko waqhekeza intliziyo yakhe kwaye emva koko "uhlawulela" umntu ngamnye, ukuze athole ubulili besilisa. Kungakhathaliseki ukuba kukhangeleka njani kubonakala ngaphandle.
Nantoni na into ongayithethayo, isizathu esivamekileyo kwisithembu sabasetyhini kukuba ngamnye umfazi ufuna nje ukuba ngumntu ozithandayo kumntu. Nangona kunjalo, iinqweno zabo ezingalawuliyo maxa wambi ziwela ngaphaya kwesinye "isikhokelo".
Sekunjalo, isidima sendlela yokucinga ngomfazi into efanayo, umzekelo:
Amadoda amaninzi - amanxana amaninzi, ubulili, iintyatyambo, uthando, iidyuli kwiitafesi kunye neenkcazelo kwimivalo.
Okubalulekileyo emehlweni abo - "Ndiyinqabileyo!" - Mhlawumbi, ingcamango eqaqambileyo entloko yowesifazane ngale ndlela yobomi. "Amadoda amaninzi athwala ngam!" ...
Intshuwalense-ewe, nguye owona mkhulu. Ngoko ukuthetha-ukuba nangomnye ubomi usasaze iindlela kunye nazo zonke ezinye iindlela zomhlaba nezomoya, kukho inkwenkwe yesibini kwindawo egcinwe kuyo eya kufudumala nokuzisola.
Nangona kunjalo, ukungonakali kwenza ukuba bazive be ...
Ukuba unamakhwenkwe amabini, ngoko ufuna ixesha eliphindwe kabini! Akunjalo? Kungakhathaliseki ukuba ujika njani, umfazi akakwazi ukuhlala kwindawo ezimbini ngexesha elifanayo, kwaye ubomi bunjalo ngenye imini, kuya kubakho imeko xa kufuneka.
Ukuncintisana kabini, kuba Amadoda asetyenziswa ngokuqwalaselwa kwamanye amabhinqa, kuba iingxaki. I-dvumuzhikami nzima ukugcina umkhondo.
Ukubonakaliswa yingozi enkulu yesithembu. Kuyinto enzima kakhulu kwigama lomfazi.
Ubomi bomqokeleli bunokubalwa kwi-formula engathandekiyo: ukungaphumeleli kunye nemithintelo-ehlangene nomntu oyedwa, wanda ngamanani ala madoda afanayo, kunye nenani elikhulu leentlungu ezisetyenziselwe ukufihla i-sirloin. Kwaye iiseli azibuyiswa, ekugqibeleni-ukuguga kwasekuqaleni.
Ulibale nawuphi na? M, Ewe! Ndingazange ndithathe ingqalelo njani iphosakelo ebalulekileyo, njenge-MINUS, minuscin ngqo. Ngenxa yokuba Ukuze ube yindoda yesithembu, kuyimfuneko ukuba ungabi nesazela nonke, kodwa ube nekratshi. Kwaye konke oku kufuneka kudibaniswe nokuzingca kunye nothando olungapheli ... kuwe!
Kodwa ukuba usenakukwazi ukumelana nale ndlela yokwenza ubomi bakho, ehlanjelwe kwi-bone marrow adrenaline kunye nokuphazamiseka, khumbula imigaqo emine eyintloko yokuqhuba isithembu:
Ungaze, uve, ungalokothi ufumane ubudlelwane namadoda avela kwinkampani enye esebenza kwintlangano enye, ehamba epakini enye okanye ebhukuda kwelinye elwandle! Oku kuya kubangela umphumo owonakalisayo kakhulu kuni ... Kwaye ukuba abafana abanegazi elitshisayo, omnye umntu unokuba sezantsi kwepompo.
Umgaqo we sibini:
Ngokuqhelekileyo kubonakala kubasetyhini ukuba akukho mntu uqaphele ingxoxo yakho "yokuthula" ngefowuni nge-whisper, amabinzana afana athi "Masithethe ngokukhawuleza", akayi kuthobela izipho ezingaqhelekanga ekhaya lakho ngaphambi kokuba ufunde i-imeyile yakho kwi-imeyile. Khumbula - kuzo ezi zinto ezincinci wonke umntu afikelela kuzo!
Inombolo yesithathu yomthetho:
Ukuba ulala kakhulu, amathuba okuphakanyiswa ukuba uya kubhenca. Ukuze ungabanjwa, kukulungele ukushiya imibuzo kwaye ungathethi nto de kube sekupheleni. Ngokomzekelo, ungatsho ukuba uhamba yonke imini ukuthenga ngeenxa zonke, kuba Kulula kakhulu ukujonga kunye naloo nto intombi. Kungcono ukuvuma ngokunyanisekileyo ukuba uyahamba wedwa kwaye wayefuna isipho sokuzalwa kuye, kodwa ngelishwa, akukho nto ifanelekileyo.
Ewe, umthetho wokugqibela:
Awudingi ukuxelela abahlobo bakho ngempumelelo yakho kwisithembu. Kulo lonke umfazi ngaphakathi kuye unqwenela ukuxelela wonke umntu kunye nento into ethile kumntu. Kuphela ukuhleba. Oku kuyintloko yeentombazana. Musa ukuthembela nabani na, kungekhona nababhinqa beentombi.
Kutheni abanye abafazi behlala behle, ngelixa abanye bengaboni?
Kuthekani ukuba ndididekile kumhlobo wam?
Isibikezelo seenkwenkwezi ngesibonakaliso se-Aries ngo-2010
Isaladi yehlobo kunye ne-lettuce ne-chinan
Indlela yokuhlamba iimpahla zentsana?
Ungayinqoba njani kwaye ulahlekelwe yintloni
Ziziphi iintlobo abantu abazenzayo?
Ukunyamekela nokucoceka kwesikhumba somntwana
Ukukhetha izambatho zomtshato ezilungileyo
Intombi u-Elena Malysheva ulahlekelwe yiekhilo ezili-120: umbonisi wathi malunga nokutya okunempumelelo